कपिलवस्तु । कपिलवस्तु अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका एक युवकको कोरोना भाइरस परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । कपिलवस्तुको विजयनगर २ जर्लैया घर भएका उनको सोमबार साँझ उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
कोरोनाबाट एक नेपालीको मृत्यु
एक दिनअघि नै कोरोनाको आंशका गर्दै उनको स्वाब परीक्षणका लागि भैरहवा पठाइएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.किशोर बञ्जााडेले बताए । बिरामीलाई शुक्रबार शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटामा रहेको अस्पतालबाट सिफारिस गरी कपिलवस्तु अस्पताल पठाइएको थियो ।
‘छाती दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएकाले आइसोलेशनमा राखेर उपचार गरिएको बञ्जाडेले बताए । रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले उनको शव परिवारको जिम्मा लगाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए ।
नेपालगञ्जमा कोरोना जाँच यन्त्र जडान
राँझा –कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न नेपालगञ्जमा पोलिमर चेन रिएक्सन (पिसिआर) मेशिन जडान शुरु भएको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका शङ्कास्पद बिरामीलाई लक्ष्य गरी भेरी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि यन्त्र जडान आजदेखि शुरु भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आज नेपालगञ्ज आइपुगेको यन्त्र जडान गर्न शुरु गरिएको छ । यन्त्र जडान गरेर एकदुई दिनमै कोरोना भाइरस परीक्षण शुरु गरिने छ । भेरी अस्पतालमा जडान भइरहेको यन्त्रले एक दिनमा सय जना जतिको कोरोना भाइरस नमूना परीक्षण गर्न सक्नेछ ।
भेरी अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्ने पिसिआर मेशिन खरीद तथा जडानका लागि प्रदेश सरकारले आफैं खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
चार सय एकान्तबासमा
बाँकेमा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका एकान्तवासमा चार सय जना भन्दा बढी निगरानीमा छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म ३१ जनाको नमूना जाँच भएको छ भने २३ जनाको नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजङ्ग शाहले जानकारी दिए ।
आज नेपालगञ्ज आएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले यसप्रति चासो देखाउँदै बाँके र बर्दिया जिल्लाका शङ्कास्पद विरामीलाई लक्ष्य गरी भेरी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षण यन्त्र जडानको काम द्रुतगतिमा गर्न निर्देशन दिए ।
राज्यमन्त्री रावतले नेपालगञ्जमा भेरी अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा.थापासँग कोरोना परीक्षण यन्त्र जडानको प्रक्रियावारे जानकारी लिँदै कुनै ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । अस्पताल प्रमुख डा.थापाले आजदेखि नै भेरी अस्पतालमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि यन्त्र जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
रगत अभाव नहुन दिन पहल
कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा बिरामीलाई रगतको अभाव नदिन पहल गरिएको छ । बन्दाबन्दीका कारण बाँकेस्थित अस्पतालमा रगतको अभाव भएपछि अन्तर पार्टी युवा सञ्जाल बाँकेले २४ सै घण्टा बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुआत गरेको छ ।
रगतका अभावमा रहेका बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउन सञ्जालले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर रगत सङ्कलनदेखि बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै आएको नेकपा बाँकेका कार्यालय सदस्य रत्न खत्रीले जानकारी दिए ।
गुल्मीबाट पाँच जनाको स्वाब परीक्षण
गुल्मी– कोरोना संक्रमणको आशंकामा जिल्लामा पहिलो पटक पाँच व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छ । रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिका तथा सत्यवती गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा रहेका पाँच व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेर आज प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भैरहवामा पठाइएको गुल्मी अस्पताल तम्घासका डा.उत्तम पच्याले जानकारी दिए ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिमध्ये रेसुंगाबाट एक, मुसिकोटबाट दुई र सत्यवती गाउँपालिकावाट दुई गरी पाँच व्यक्तिको स्वाब परीक्षणका लागि भैरहवा पठाइएको हो । स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएका पाँचै जना यही चैत ४ गते कतार एयरवेजको विमानबाट कोरोना संक्रमित युवतीसँगै नेपाल आएका थिए ।
विश्वलाई आतङ्कित बनाइरहेकाे कोरोनाले संक्रमण कसरी गर्छ ?
कसले बनायो 'कोरोना भाइरस' ? खुल्यो यस्ताे रहस्य
कास्की पोखराको मेसिनले घरी पोजेटिभ देखाउँछ घरी नेगेटिभ'
पृथ्वी शान्त, घरभित्र हिंसा : लकडाउनले बढायो संसारभरी महिला हिंसा